reliance finance limited(reliance finance limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको लाभांश पारित गर्दै रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको ११ औँ वार्षिक साधारणसभा आज बुधबार सम्पन्न भएको छ। कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा आज भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न भएको हो। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित चुक्तापुँजीको कुल १०.५३ प्रतिशतले हुन आउने लाभांश अनुमोदन गरेको छ। जसमा १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर...
रिलायन्स फाइनान्सको नाफा ३७.३०%ले बढ्यो, रिजर्भमा उछाल, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको नाफा ३७.३० प्रतिशतले बढेको छ। आज सार्वजनिक तेस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले समीक्षा अवधिसम्म ८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले ६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीको...
आजसम्म कायम सेयरधनीले रिलायन्स फाइनान्सको लाभांश पाउने
काठमाण्डौ । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज (वैशाख ९ गते) अन्तिम मौका रहेको छ। लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले भोलि (वैशाख १० गते) एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आजसम्म कायम सेयरधनीहरुमा यो कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लाभांश पाउन र सभामा...
काठमाण्डौ । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडले आफ्नो ११ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। संस्थाको हिजो मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो वैशाख २२ गते बुधबार आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको लैनचौरस्थित लैनचौर बैंक्वेटमा बिहान ११ बाट भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित...
रिलायन्स फाइनान्सले १०% बोनस सेयर बाँड्ने
काठमाण्डौ । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको हिजो बिहीबार बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजीको कुल १०.५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभांशमा चुक्तापुँजी ८३ करोड २४ लाख १६ हजार ६३ रुपैयाँको १० प्रतिशतले हुन आउने ८ करोड ३२ लाख ४१...
रिलायन्स फाइनान्सले नगद लाभांशमात्र प्रस्ताव, कति ?
काठमाण्डौ । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संस्थाको आज बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । संस्थाले चुक्तापुँजी ८३ करोड २४ लाख १६ हजार ६३ रुपैयाँको ६.५८ प्रतिशतले हुन आउने ५ करोड ४७...
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत गत भदौ ३१ गते भएको भारी वर्षाका कारण आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्र सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका–६ मुसहर बस्तीका पीडितहरुलाई सहयोग गरेको छ । बैंकले ४२ घरधुरीका पीडितलाई खाद्यान्न तथा झुल सहयोग गरेको हो। उक्त बाढीबाट बस्तीमा ठुलो धनजनको...
रिलायन्स फाइनान्सको सेयर बिक्न धौ धौ, चौथोपटक लिलामीमा
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा प्रतिकित्ता ११० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको रिलायन्स फाइनान्सको १ लाख ८८ हजार ८७४.५२ कित्ता संस्थापक समूहतर्फ नबिकेको हकप्रद सेयर आज(शुक्रबार)देखि पुनः लिलामीमा आएको छ । कम्पनीले नबिकेको सेयर बिकाउन लिलामीको सूचना निकालेको यो चौथो पटक हो । यो कम्पनीले पहिलो पटक भने नबिकेको ५ लाख ४२ हजार ३१४.५२ कित्ता सेयर...
रिलायन्स फाइनान्सको सेयर नबिकेर यस्तो कन्तबिजोग !
काठमाण्डौ । लिलामीबाट समेत सेयर बिक्री हुन छाडेपछि कतिपय कम्पनीलाई पूँजी वृद्धिमा निकै ठूलो सकस परिरहेको छ । यस्तैमध्येको एक कम्पनीको हो रिलायन्स फाइनान्स । जसले ३ पटकको प्रयासमा समेत हकप्रदबाट बिक्री गर्न सकेन । यो कम्पनीले तेश्रो पटक साउन ८ गतेदेखि ३ लाख १ हजार २ सय ७४.५२ कित्ता बिक्री नभएको सेयरको लिलामीमा खुलाएको थियो । लिलामीमा...
सिन्धुलीको कमलामाईमा मुक्तिनाथ विकास बैंक
काठमाण्डौ । आधुनिक बैंकिङ्ग, ग्रामीण बैंकिङ्ग र लघुवित्त सेवा एकै साथ संचालन गर्दै आएको मुक्तिनाथ विकास बैंकले देशैभर आफ्ना शाखा सञ्जालहरु विस्तार गर्ने क्रममा सिन्धुलीको कमलामाई, धुराबजारमा साउन २१ गतेबाट औपचारिक रुपमा शाखा स्थापना गरी कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । शाखाको समुद्घाटन कमलामाई नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर खत्रीले गरे ।...
लिलामीबाट सेयर बिकाउने रिलायन्सको तेश्रो प्रयास, बोनसले तान्ला ध्यान ?
काठमाण्डौ । लिलामीबाट समेत सेयर बिक्री हुन छाडेपछि कतिपय कम्पनीलाई पूँजी वृद्धिमा निकै ठूलो सकस परिरहेको छ । यस्तैमध्येको एक कम्पनीको हो रिलायन्स फाइनान्स । जसले २ पटकको प्रयासमा समेत हकप्रदबाट बिक्री नभएको सेयर लिलामीबाट बिक्री गर्न नसकेपछि आज(साउन ८ गते)देखि तेश्रो पटक लिलामी खुलाएको छ । यो कम्पनीले ३ लाख १ हजार २ सय ७४.५२ कित्ता...
लिलामीको सेयर पनि बिक्न छाड्यो, रिलायन्स फाइनान्सको तेश्रो प्रयास
काठमाण्डौ । रिलायन्स फाइनान्स लिमीटेडले आगामी साउन ८ गतेदेखि बिक्री नभएको हकप्रद सेयरको लिलामी खुलाउने भएको छ । यो कम्पनीले ३ लाख १ हजार २ सय ७४.५२ कित्ता बिक्री नभएको संस्थापक सेयरको बिक्री खुलाउन लागेको हो । लिलामीमा सहभागी हुनका लागि साउन १६ गतेसम्म आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । इच्छुकले न्यूनतम १ हजार कित्तादेखि अधिकतममा सम्पूर्ण...
रिलायन्सको हकप्रद आजदेखि, मंसिर ७ सम्मका सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन पाउने
काठमाण्डौ । रिलायन्स फाइनान्स लिमीटेडले आज(मंसिर २२ गते)देखि १० बराबर ४.५ को अनुपातमा हकप्रद सेयरको बिक्री खुलाएको छ । हकप्रदका लागि सेयरधनीले पुस २७ गतेभित्रमा आवेदन दिनुपर्नेछ । यो कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरका कुल २३ लाख ६ हजार ५ सय ७१ दशमलव ६० कित्ता हकप्रद बिक्री गर्नेछ । हाल यो कम्पनीको चुक्तापुँजी ५१ करोड २५ लाख ७१ हजार रहेको छ ।...